Ahoana ny famahanana alika puppy | Tontolo alika
Misy mpikambana volom-borona vaovao tonga ao an-tranonao? Raha izany dia arahaba soa! Ny fahatongavan'alika dia mahafaly foana raha kasainaina izany, ka azo antoka fa manomboka izao dia hampihomehy anao, ary hitomany koa (antenaina fa hahafaly foana izany, fa tsarovy fa indraindray koa mety hahatonga anao harary).
Fa mazava ho azy, ny alika dia tsy tonga miaraka amin'ny boky torolàlana, ary rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha alika kely dia mahazatra ny fisalasalana maro momba ny fomba hamahanana azy ireo. Ka raha te hahalala ianao ny fomba famahanana alika alika kely, tonga teo amin'ny toerana mety ianao. Fantaro ny antony.
Satria tsy hihinana zavatra mitovy amin'izany izy rehefa feno 2 herinandro toy ny tamin'ny 6 volana, dia handeha tsikelikely izahay mba ho mora aminao ny hahafantatra ny fomba sy ny fotoana tokony hanomezanao azy azy.
1 0 hatramin'ny 1 volana
2 Manomboka amin'ny 1 volana ka hatramin'ny 3 volana
3 3 volana isan-taona
4 Impiry tokony hihinana ianao?
0 hatramin'ny 1 volana
Mandritra io dingana io dia tena marefo izy io. Raha tsy manana ny reniny izy dia azonao antoka fa mandray hafanana mandritra ny andro izy (miaraka amin'ny lamba firakotra sy tavoahangy mafana), ary tsy maintsy hanome sakafo azy koa ianao isaky ny 3 ora misy ronono manokana ho an'ny alikakely miaraka amin'ny syringe na tavoahangy izay ho hitanao any amin'ireo magazay biby. Ity ronono ity dia tsy maintsy mafana, amin'ny 37ºC eo ho eo.
Tsy tokony omena azy ny rononon'omby satria mety hiteraka tsy mahazo aina amin'ny vavony, ary koa fivalanana.
Manomboka amin'ny 1 volana ka hatramin'ny 3 volana
Manomboka amin'ity vanim-potoana ity afaka manomboka mihinana sakafo matanjaka sy avo lenta. Raha ny tokony ho izy dia tokony hihinana sakafo an-jaza mando izy, nefa azonao omena azy koa ny sakafo alika kely mifono rano.
Mandritra ny 2-3 volana dia hitombo ny nify hahafahana mitsako ny sakafo tsy misy olana.
3 volana isan-taona
Mandritra ireo volana ireo dia afaka mihinana sakafo an-jaza maina ianao. Saingy, manindry mafy aho fa tsy maintsy kalitao tsara izany. Biby mpihinana hena ilay alika, araka izany ny sakafo fototra dia tokony ho hena, ary tsy misy vokatra by na voa. Aorian'izay vao afaka mitombo sy mivoatra tsy misy olana.
Impiry tokony hihinana ianao?
Miankina amin'ny isan'ny taonan'ny alikanao, tsy maintsy hanome sakafo azy matetika na mihoatra ianao:
Manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 volana: In-4 isan'andro.
Manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 6 volana: In-3 isan'andro.
Manomboka amin'ny 6 volana: In-2 isan'andro.
Ankafizo ilay namanao volom-borona vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Ahoana ny famahanana alika alika kely
Faly aho fa nankafizinao izany, Santi. 🙂
Ny alika miasa indrindra
Ahoana no hahalalana raha afaka mividy alika aho